Isqorista - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Xarunta Diiwaangelinta Dugsiyada Robbinsdale Aagga ayaa maamusha nidaamka diiwaangelinta dhammaan ardayda cusub ee soo laabatay iyo kuwa soo noqonaya ee K-12, iyo sidoo kale wax ka beddelka cinwaanka. Shaqaalaheenu waxay ku faraxsanyihiin inay waxbadan kaaga sheegaan iskuuladeena iyo barnaamijyada qaaska ah, sida Isbaanishka immersion ama labo-luuqad, STEAM, International Baccalaureate (IB) iyo Advanced Placement courses. Xarunta Diiwaangelinta, waxaad sidoo kale ka baran kartaa waxtarrada waxbarashada sida qado bilaash ah iyo qiimo dhimis ah; baska iyo gaadiidka; ka wada hadlaan welwelka la xiriira caafimaadka iyo tallaalada; iyo sidoo kale qiimeyn luqadeed oo loogu talagalay Adeegyada Barashada Ingiriisiga.
Telefoonka : 763-504-8080
Email : Enrollment@rdale.org
Cinwaanka: 4148 Winnetka Avenue North, New Hope, MN 55427
Saacadaha : Isniinta ilaa Jimcaha, 8 am - 4 pm
Sababtoo ah COVID-19, fadlan wac ballan kahor booqashada.
Para leer esto en español, haga clic en el botón que dice 'Ingiriis' (Inglés) en la parte inferior derecha de la pantalla.
Guji badhanka ay ku qoran tahay "Ingiriis" dhinaca midig ee hoose ee shaashadda ku jirta tan ugu akhriso af Soomaali.
Macluumaadka Carruurnimada Hore
Dukumiintiyada looga baahan yahay isqorista
Ururi dukumiintiyada diiwaangelinta ee loo baahan yahay, oo ay ku jiraan
Dugsiyada Robbinsdale Area waxaa ka go'an jawi waxbarasho oo caafimaad qaba oo aamin ah. Sharciga Minnesota wuxuu ubaahanyahay talaalada qaarkood, ama cadeyn qoraal ah oo ka dhaafida, ardayda inay dhigtaan iskuulka. Ardayda looma ogola inay dhigtaan iskuulka ilaa ay u hogaansamayaan Sharciga Talaalka Minnesota. Fadlan eeg bogga Waaxda Caafimaadka ee Minnesota wixii macluumaad dheeraad ah iyo Foomka Tallaalka.
Warqadda Dhalashada ama Baasaboorka
Haddii la keenayo shahaadada dhalashada, nuqul rasmi ah ama nuqul la caddeeyey ayaa loo baahan yahay. Tan waxaa looga baahan yahay Xannaanada iyo ardayda aan horey dugsiga uga qorin.
Baaritaanka Carruurnimada Hore ee Xanaanada
Baaritaanka Carruurnimada Hore waxaa looga baahan yahay dhammaan carruurta ka hor inta aysan bilaabin xanaanada. Baadhitaanka ayaa la samayn karaa markuu ilmahaagu gaadho 3-5 jir. Dugsiyada Robbinsdale Area waxay ku bixiyaan baaritaan bilaash ah Xarunta Waxbarida Rajada Cusub, 8301 47th Ave. N. Rajada Cusub. Si ballan loo sameeyo, wac (763) 504-4180.
Keenso hal caddeyn deggenaasho, oo ay kujiraan biil koronto (gaas, biyo, koronto, qashin) la keenay 30-kii maalmood ee la soo dhaafay; liisanka darawalnimada oo ansax ah; qoraalka kirada oo ku taariikheysan 30-kii maalmood ee la soo dhaafay; heshiiska iibsiga (oo la saxiixay oo taariikheysan) ee loogu talagalay guri ku yaal xuduudaha degmada; ama heshiis kiro (la saxeexay oo taariikhaysan) oo leh taariikho heshiis ah.
Xaqiiji aagaga xaadiritaanka ee iskuulkaaga ama isticmaal qalabka raadinta iskuulka ee kore.
Qoraallada qoraalka, fasalka 9-12aad
Isqorista Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Waxaan ku siineynaa seddex qaab oo aad iskaga qori karto ardaygaaga: khadka tooska ah; dhammaystir waraaqaha isqorista ee guriga oo aad dirto; ama ballan sameyso oo dhameystir shaqsi ahaan.
Xulashada 1 - khadka tooska ah
Xulashada 2 - dhammaystir oo soo celi waraaqaha
Xulashada 3 - Isqorista Qof ahaan
Dhagsii badhanka hoose si aad uga dhammaystirto isqoritaankaaga khadka tooska ah.
Isqorista K-12 ee khadka tooska ah
Soo dejiso oo buuxi baakadda Isqorista. Baakado adag oo nuqul ah ayaa laga heli karaa soo-qaadista Xarunta Diiwaangelinta haddii aadan awoodin inaad wax ka daabacato gurigaaga. Xirmooyinka xirmooyinka waxaa lagu soo celin karaa fakis (763-504-8081); emayl ( Enrollment@rdale.org ); tagid ama u dir Xarunta Diiwaangelinta.
Xirmooyinka Diiwaangelinta - Ingiriisi
Baakadda diiwaangelinta - Isbaanish
Xulashada 3 - ballan ka dhig si aad iskuqorto shaqsi ahaan
Samee ballan si aad shaqsi ahaan iskaga diiwaangeliso. Balan waxaa lagu heli karaa adoo wacaya 763-504-8080. Sababtoo ah COVID-19, qoysaska waxaa laga codsanayaa inay xadidaan tirada dadka imanaya Xarunta Diiwaangelinta, oo ay xirtaan daboolida wajiga.
Xanaanada - Dugsiyada Magnet
Bedelka Iskuulka (Gudaha Degmada)
Xannaanadu waa taariikh muhiim u ah barashada nolosha oo dhan. Xannaanadu waa xilli la kobciyo lana kobciyo jacaylka waxbarashada iyada oo loo marayo sahaminta danaha cusub ee adduunka, iyo iyadoo la dhisayo aqoon iyo xirfado. Iskuulada Robbinsdale Area, waxaan aaminsanahay in arday walba u gaar yahay, waxaana naga go'an inaan diirada saarno arday walba kartidiisa heer tacliineed.
Macallimiinteena gaarka ah ee xanaanada waxay leeyihiin jacayl dhab ah oo xagga wax barashada ah iyo u heellan hadiyadaha ardayda yar yar. Waxay ka caawiyaan dhimirka mala-awaalka, waxayna ku dhiirrigeliyaan xamaasadda inay su'aalo weydiiyaan, ogaadaan adduunka, abuuraan qurux iyo heer sare.
Goorma ayaa la iska qorayaa Xannaanada
Carruurta gaartey dhalashadooda 5aad bisha Sebtember 1 ama ka hor waxay xaq u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan xanaanada sannad dugsiyeedka isla markaaba ka dib dhalashadooda. Waxaan ku siineynaa bilaash maalinta oo dhan xanaanada dhamaan iskuulada hoose (meeleynta nuska maalin waxaa lagu heli karaa codsi).
Caruurnimadeena Hore Aan U Diyaar Garowno Xannaanada Tilmaamaha Qoyska waxay haysaa macluumaad badan oo ku saabsan heerarka tacliimeed, jadwalka diiwaangelinta macluumaadka xiriirka dugsiga, ilaha carruurnimada hore iyo inbadan.
Hagaha Qoyska - Ingiriisi
Warqada Diyaargarowga Xanaanada
Qoysas, waxaad tihiin macallinka ugu muhiimsan ee ilmahaaga! Isku qor si aad u hesho wargeysyada billaha ah ee Bilowga Carruurnimada, Maarso-Ogosto 2020, oo ay ku jiraan talooyinka waalidnimada, barashada ciyaaraha iyo waxqabadyada, iyo cusbooneysiinta ku saabsan bilowga dugsiga.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay bixiyaan saddex dugsi hoose oo magnet ah:
FAIR Dugsiga Xajka - dugsiga farshaxanka wanaagsan
Robbinsdale Spanish Immersion School (RSI) - Iskuulka lagu barto luqadda Isbaanishka
Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka (SEA) - sayniska, teknolojiyadda, injineernimada, farshaxanka iyo dugsiga xisaabta
Nidaamka Diiwaangelinta Magnet ee Xanaanada
Qoysaska daneynaya inay ka qoraan xanaanadooda kindergarten iskuulka magnet waxaa looga baahan yahay inay buuxiyaan soona gudbiyaan arji. Qoysaska leh arday (yaal) ka da 'weyn oo hadda ka diiwaangashan RSI, SEA ama FAIR School Pilgrim Lane waa inay sidoo kale dhammaystiraan arjiga ardeyga xanaanada ee imanaya; walaalaha ardayda hadda dhigata, ee buuxiya waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga, waxay heli doonaan kursi iyada oo loo marayo nidaamka doorbidista walaalaha.
Haddii dugsigu leeyahay codsadeyaal ka badan inta boos ee bannaan, ardayda cusub ee xanaanada waxaa lagu dooran doonaa bakhtiyaanasiib.
Codsiga Bakhtiyaanasiibka Magnet-ka ee Xannaanada
Foomka Go'aaminta Maaliyadeed ee Qoyska
Tiro cayiman oo kuraas ah ayaa loo qoondeeyay qoysaska buuxiya tilmaamaha dakhliga gaarka ah. Haddii aadan hubin inaad u qalanto, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad buuxiso oo aad soo gudbiso foomka.
Foomka go'aaminta maaliyadeed
2021-2022 Bakhtiyaanasiibka Magnet
Talaado, Dec. 1, 2020
Codsiyada bakhtiyaa-nasiibka Xannaanada waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee loogu talagalay FAIR Dugsiga Xajka, RSI iyo SEA
Jimco, Febraayo 26, 2021
Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga - 4 pm
Arbaco, Maarso 10, 2021
Natiijooyinka bakhtiyaa-nasiibka ayaa laga heli karaa khadka tooska ah
Talaado, Maarso 16, 2021
Waqtiga ugu dambeeya ee ballanqaadka isqorista
Su'aalo? Iimaylka magnetapplication@rdale.org
Siyaasadda 599 AP: Dugsiga barbaarinta carruurta ee RSIS, SEA, FAIR-PL
LAYNKA Xajka ee FAQADA
FAIR wuxuu u taagan yahay Kheyraadka Farshaxanka Farshaxanka. FAIR Xajka Lane wuxuu diirada saaraa fanka, heer sare iyo sinaan. Ardaydu waxay wax ku bartaan maadooyin anshaxeed iyo tacliin adag oo kobciya fekerka hal abuurka iyo hal abuurka leh. Khibrada ardayga ee FAIR School Pilgrim Lane waxaa wanaajiyay iskaashiga gaarka ah ee dugsigu la leeyahay ururada bulshada iyo fanaaniinta maxalliga ah, oo ay ka mid yihiin Tiyaatarka STAGES, oo siinaya fursado qibrad qoto dheer leh farshaxanno fara badan. Isqorista Xanaanadu waa 88 arday. Kadib Safarka Xajka ee FAIR, ardaydu waxay u guuraan FAIR School Crystal fasalada 5-8.
Ardayda dhigata Robbinsdale Spanish Immersion School (RSI) waxay ku bartaan Isbaanishka iyagoo adeegsanaya. Qaabdhismeedka barnaamijka awgiis, ardaydu waa inay ka bilaabaan RSI xanaanada ama imtixaanka si ay ugu muujiyaan aqoon heer fasal kale haddii uu jiro furitaan. Dhammaan waxbarista fasalka waxaa lagu qaadaa Isbaanish, oo ay ku jiraan Xanaanada. Ardaydu waxay bartaan inay wax ku akhriyaan, ku qoraan kuna hadlaan Isbaanishka, waxayna bilaabaan inay fahmaan dhaqamada ku hadla Isbaanishka. Isdiiwaangalinta xanaanada caruurta ee RSI waa 132 arday. Kadib RSI, ardaydu waxay usii gudbaan barnaamijka dhexgalka dugsiga dhexe ee Dugsiga Dhexe ee Plymouth.
Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka (SEA) waxaa loogu talagalay ardayda ku raaxeysata baaritaanka adduunka ku xeeran, iyagoo adeegsanaya hal-abuur si ay u xalliyaan dhibaatooyinka una xalliyaan caqabadaha. Macallimiintu waxay adeegsadaan tilmaamaha ku saleysan su'aalaha si ay ugu gudbiyaan manhaj heer sare ah oo ku saleysan waxbarasho dhammaystiran, kuna saleysan helitaanka iyo barashada gacanta. Diirad saarista injineernimada iyo farshaxanka ayaa u oggolaanaya ardayda inay fahmaan habka naqshadeynta maadaama ay ku soo bandhigeyso dhammaan maadooyinka muhiimka ah, iyo inay bartaan siyaabo cusub oo lagula xiriiro natiijooyinkooda. Isku darka waxbarasho heer sare ah oo STEM ah oo lagu daray waxbarasho farshaxan oo hodan ah (STEAM) ayaa ka caawin doonta ardayda inay horumariyaan hoggaamiyeyaal hal abuur leh oo muhiim u ah bulshada adduunka. Isqorista xanaanada ee SEA waa 66 arday.
Khariidadaha Socda ee Dugsiyada Magnet
Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka
Waa maxay heerka fasalka ee bakhtiyaanasiibka?
Bakhtiyaa-nasiibka waxaa loogu talagalay oo keliya ardayda iska diiwaangelisa xanaanada carruurta markii ugu horreysay. Gelitaanka / u wareejinta heerarka fasalada kale, oo ay ku jiraan FAIR Crystal, waxaa looga baaraandegaa Ikhtiyaariyada Isqorista.
Immisa baro xannaano ayaa la heli karaa?
Waxaa ku yaal 88 kursi FAIR Dugsiga Xajka, 132 boos oo RSI ah iyo 66 meelood oo SEA ah oo loogu talagalay ardayda xanaanada imaaneysa.
Ma dalban karaa LAYNKA Xajka ee FAQADA, RSI iyo SEA? Codsashada iskuullo badan saameyn ma ku yeelan doontaa fursadaha aan ka helayo bakhtiyaanasiibka?
Haa, waad codsan kartaa dhammaan iskuulada magnetka. Waxaad fursad siman ku heli doontaa bakhtiyaanasiibka.
Ma codsan karaa iskuulada magnetka iyo iskuulka aaggayga?
Haa. Waxaa lagugula talinayaa qoysaska inay waliba codsadaan iskuulka aaggooda, maadaama tiro kooban oo boosas ah laga heli karo dugsiyadeena birlabta.
Ma dalban karaa bakhtiyaanasiibka haddii aanan ku noolayn Degmada Dugsiga Robbinsdale?
Haa. Boqolkiiba kuraasta ayaa loo qoondeeyay codsadayaasha aan deegaanka ahayn.
Kawaran haddii aan haysto mataano / saddex mataano / isku dhufasho kale oo codsanaya?
Waxaad ku qori kartaa macluumaadka arday badan hal foom codsi. Sida ku xusan Nidaamka Maamulka 599AP, "haddii ay dhacdo in walaalaha isku fasalka ah ay codsadaan, kaliya hal magac ayaa la gallin doonaa bakhtiyaanasiibka oo haddii la doorto, mid kasta oo ka mid ah ardaydaas waa la oggolaan doonaa."
Haddii walaalka ka weyn ee ilmahaygu hadda ka diiwaangashan yahay LAYLAHA Xajka ee FAIR, RSI ama SEA, ama dugsiga dhexe ee Spanish Immersion (PMS) ama FAIR School Crystal, ma u baahanahay inaan buuxiyo arji?
Haa. Waa inaad soo gudbisaa codsi kahor waqtiga kama dambaysta ah ee dalabka si ilmahaagu ugu qalmo isqorista otomaatiga ah.
Gaadiid ma la siiyaa?
Gaadiid bilaash ah ayaa la siiyaa dadka degan Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale. Dadka degan Waqooyiga Minneapolis ayaa sidoo kale xaq u yeelan kara gaadiid. (Wac 763-504-8080 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo khuseeya u-qalmitaanka.) Fadlan maskaxda ku hay marinnada basaska ee loo raaco dugsiyada magnet inay ka dheeraan karaan dugsiyada kale. Macluumaadka joogsiga baska waxaa loo diraa dhammaan dadka degmada deggen dabayaaqada Ogosto.
Goorma ayaan ogaadaa natiijada bakhtiyaa-nasiibka?
Natiijooyinka bakhtiyaa-nasiibka ayaa sida caadiga ah la heli karaa laga bilaabo bilowga Maarso. Qoysaska dhammeystira arjiga khadka tooska ah waxaa lagu ogeysiin doonaa xaaladdooda gelitaan iyaga oo adeegsanaya emayl waxayna awoodi doonaan inay ku eegaan natiijooyinkooda iyagoo booqanaya magnetlottery.rdale.org . Soo gal adoo adeegsanaya cinwaanka emaylka iyo lambarka sirta ah ee la soo saaray intii lagu jiray hawsha dalabka. Natiijooyinka bakhtiyaa-nasiibka waxaa loo diri doonaa qoysaska dhammeystiray codsiyada waraaqaha, sidoo kale bilaabmaya horraanta Maarso. Bakhtiyaanasiibka ayaa la qaban doonaa toddobaadle ilaa inta laga aqbalayo dhammaan kuraasta iyo sida loogu baahan yahay marka kuraasta xanaanadu ay diyaar noqoto sannad dugsiyeedka oo dhan.
Sidee cunugeyga weyn iskaga qori karaa RSIS, FAIR, ama SEA?
RSI, fasalada 1-5: Ardayda Robbinsdale ee fasalada 1-5 waxay soo gudbin karaan foomka bedelka iskuulka si loogu ogolaado. Ardayda mustaqbalka ee ku nool meel ka baxsan degmada waxay soo gudbin karaan foom isqoris furan si loogu ogolaado. Sida ku cad Nidaamka Maamulka 509AP, Ikhtiyaariyada Isqorista, ardayda cusub ee codsata gelitaanka RSI waa inay lahaadaan khibrad hore ee luqadda ama ay muujiyaan aqoonta heerka fasalka. Caadi ahaan, ardayda cusubi waxay awoodaan inay muujiyaan aqoonta luuqadeed ee heerka fasalka haddii ay ka soo wareegayaan dugsi kale oo dhexdooda ah, waxay leeyihiin af Isbaanish oo reerkooda ah ama leh asal Isbaanish ah oo ballaaran.
SEA, fasalada 1-5: Ardayda Robbinsdale ee fasalada 1-5 waxay soo gudbin karaan foomka bedelka iskuulka si loogu ogolaado. Ardayda mustaqbalka ee ku nool meel ka baxsan degmada waxay soo gudbin karaan foom isqoris furan si loogu ogolaado.
FAIR Xajka Iskuulka, fasalada 1-4: Ardayda Robbinsdale ee fasalada 1-4 waxay soo gudbin karaan foomka bedelka iskuulka si loogu ogolaado. Ardayda mustaqbalka ee ku nool meel ka baxsan degmada waxay soo gudbin karaan foom isqoris furan si loogu ogolaado.
Ma u baahanahay inaan dib u codsado sannad kasta?
Maya. Markii la diiwaangeliyo, ardaydu way sii joogi karaan dugsiga birlabta illaa iyo inta ay diiwaangelintoodu si aan kala go 'lahayn u socoto
Sideen ku ogaan karaa in codsigayga iyo foomka Go'aaminta Maaliyadeed ee Qoyska la helay?
Waxaan u soo diri doonnaa xaqiijinta iimaylka la xiriira helitaanka labada arji iyo Foomka Go'aaminta Maaliyadeed Qoyska dhammaan codsadayaasha khadka tooska ah. Qoysaska soo gudbiya arjiyada waraaqaha ah waxay ku heli doonaan xaqiijin boostada Mareykanka. Haddii aadan helin emayl ama xaqiijin qoraal ah oo sheegaysa in la helay dalabkaaga iyo / ama Foomka Go'aaminta Dhaqaalaha Qoyska, waa mas'uuliyaddaada inaad nala soo xiriirto magnetapplication@rdale.org ama aad soo wacdo 763-504-8034. Codsiyada iyo foomamka Go'aaminta Maaliyadeed ee Qoyska ee lagu helay si elektaroonig ah ama dib loogu calaamadeeyay kadib marka la soo gabagabeeyo bakhtiyaanasiibka magnetka lama aqbali doono.
Sideen ku ogaan karaa wax badan oo ku saabsan FAIR, RSI iyo / ama BADDA?
Booqo boggooda internetka: rsi.rdale.org, fair.rdale.org, iyo sea.rdale.org. Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa xoghayayaasha dugsiga 763-504-8400 (FAIR-PL), 763-504-4400 (RSI) ama 763-504-7200 (SEA) si aad u ballansatid booqasho.
Foomka wareejinta dugsiga ayaa loo baahan yahay marka:
arday degan ayaa doonaya inuu dhigto iskuul kale oo aan aheyn iskuulka aaggooda
arday aan deganeyn oo loo aqbalay isqorista furan oo raba inuu dhigto Dugsi ka duwan Deegaanka Robbinsdale
Codsiyada Wareejinta Dugsiga waxay kuxirantahay helitaanka boos, taariikhda Foomka Wareejinta Dugsiga la helo iyo sida mudnaanta loo siiyo. Diiwaangelinta walaalaha, habeynta xanaano maalmeedka iyo xaaladaha u gaarka ah arday gaar ah ayaa la tixgeliyaa, laakiin dammaanad kama qaadin oggolaanshaha codsiga bedelka.
Foomka Wareejinta Dugsiyada ee 2020-2021
20-21 Foomka TransfEr - Ingiriis
20-21 Foomka TransfEr - Isbaanish
2021-2022 Foomka Wareejinta Dugsiga
21-22 Foomka wareejinta - soomaali
21-22 Foomka Transform - Isbaanish
Ku soo celi foomamka la dhammaystiray adoo maraya:
Drop-off / mail: Xarunta Diiwaangelinta, 4148 Winnetka Ave. N., Rajo Cusub, MN 55427
Wareejinta ogeysiinta wareejinta
Mar haddii la oggolaado codsiga bedelka dugsiga, qoysaska looma baahna inay dib u codsadaan sannad kasta illaa inta ardaygu ku sii jiro dugsiga la oggolaaday. Qoysasku waxay u baahan yihiin inay dib u codsadaan beddelka dugsiga markay ardaydu u gudbaan heer cusub (tusaale ahaan, dugsi hoose, dhexe, sare illaa sare) haddii kale ardayda ayaa si otomaatig ah looga qori doonaa aaggooda dugsiga ka qeybgalka.
Qoysaska loo oggolaaday beddelka dugsiga waxaa lagu ogeysiin doonaa boostada cinwaanka gurigooda. Qoysasku waa inay la xiriiraan xarunta diiwaangelinta (763-504-7968) si loo xaqiijiyo codsigooda wareejinta. Wareejinta waxaa loo ansixiyay qaab wareeg ah.
Qoysaska ardayda loo oggolaaday beddelka dugsiga waxay u baahan doonaan inay bixiyaan gaadiid iyaga u gaar ah oo ku tagaya kana keenaya iskuul kasta oo aan magnet ahayn oo ka baxsan aaggaggooda.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg Nidaamka 509 - Ikhtiyaariyada Isqorista.
Isqorista furan waa xuquuq sharci ah oo laga helo gobolka Minnesota. Codsiga isqorista furan waa lagama maarmaan marka:
arday aan deganeyn oo ku nool banaanka degmada ayaa daneynaya inuu iska qoro Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Codsiyada isqorista furan waxaa lagu ansixiyaa iyadoo lagu saleynayo helitaanka booska, siday u kala horeeyaan iyo sida mudnaanta loo siiyo. (Diiwaangelinta Furan Janaayo 15 kama dambeyso degmadeena.)
Qoysaska daneynaya isqorista furan waa inay buuxiyaan Foomka Ikhtiyaariyada Isqorista Gobolka oo dhan. Nuqulo adag ayaa laga heli karaa si looga qaado Xarunta Diiwaangelinta.
Foomka Diiwaangelinta Furan ee 2020-2021
20-21 Foomka Ikhtiyaariyada Diiwaangelinta - Ingiriisi
20-21 Foomka xulashada isqorista - Isbaanish
20-21 Foomka xulashada isqorista - Soomaali
2021-2022 Foomka Diiwaangelinta Furan
21-22 Foomka Ikhtiyaariyada Isqorista - Ingiriisi
21-22 Foomka Ikhtiyaariyada Isqorista - Isbaanish
21-22 Foomka Ikhtiyaariyada Isqorista - Soomaali
21-22 Foomka Ikhtiyaariyada Isqorista - Hmong
Furan ogeysiiska diiwaangelinta
Mar haddii la oggolaado codsi diiwaangelin furan, qoysaska looma baahna inay dib u codsadaan sannad kasta illaa iyo inta ardaygu si joogto ah uga diiwaangashan yahay degmada. Degmadu waxay xaq u leedahay inay ku meeleyso ardayga dhisme gaar ah inta lagu gudajiro kala-guurka fasalka 5-aad ilaa fasalka 6-aad iyo fasallada 8-aad ilaa 9-aad, iyo sidoo kale marka isbeddellada soohdinta dugsiga ay lagama maarmaan noqoto.
Qoysaska loo oggolaaday diiwaangelinta furan waxaa lagu ogeysiin doonaa boostada cinwaanka gurigooda. Qoysasku waa inay la xiriiraan xarunta diiwaangelinta (763-504-8080) si loo xaqiijiyo aqbalaadooda iyo dhammaystirka diiwaangelinta taariikhda lagu sheegay warqadda. Diiwaangelinta Furan waxaa lagu ansixiyay qaab wareeg ah.
Gaadiidka baska guud ahaan lama siiyo ardayda iska diiwaangelisa xulashada isqorista furan ee gobolka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Xarunteena Diiwaangelinta (763-504-8080).
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg Nidaamka 509 - Ikhtiyaariyada Isqorista .
Macluumaadka dugsiga guriga, oo ay ku jiraan codsi gargaar iyo magdhow, shuruudaha tallaalka, qiimeynta, waxbarashada gaarka ah, isbeddelada diiwaangelinta iyo Su'aalaha la Weydiiyo, fadlan dhagsii badhanka hoose.
Khariidada Xuduudaha Degmada
Kaymaha • Lakeview • harada balliga • Neill • Noble • Northport • Sonnesyn • Zachary Lane
Dugsiyada magnet-ka ee degmada oo dhan ah: FAIR School School Xajka Lane • Robbinsdale Spanish Immersion School (RSIS) • Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka (SEA)
Khariidadda Soohdinta Hoose
Dugsiga Dhexe ee Plymouth • Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale • Dugsiga Dhexe ee Sandburg
Iskuulka magnet-ka ee degmada oo dhan: FAIR School Crystal
Khariidadda Soohdinta Dugsiga Dhexe
Dugsiga Sare ee Armstrong • Dugsiga Sare ee Cooper
Khariidadda Soohdinta Dugsiga Sare
"Aagagga lugaynta" ayaa loo sameeyay dugsi kasta. Ardayda ku nool aagga lugaynta ee dugsigooda diiwaangashan xaq uma laha inay raacaan baska.
Fogaanta Socodka ee Dugsiyada
Dugsiga Hoose (Xannaanada - Fasalka 5aad): 5/10 oo mayl ah
Dugsiga Dhexe (Fasalada 6aad - 8aad): 7/10 mayl
Dugsiga Sare (Fasalada 9aad - 12aad): 1 mayl
Khariidadaha Socda ee Socda (PDFs)